यी चार मा कांग्रेसले कसलाई बनाउला संसदीय दलको नेता ? – Ekathmandunepal
Homeराजनीतियी चार मा कांग्रेसले कसलाई बनाउला संसदीय दलको नेता ?
२६ मंसिर २०७४, मंगलवार ०४:२९ ekathmandunepal राजनीति 0
काठमाडौं, २५ मंसिर । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ । अझै केही दिन लाग्ने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । तर, निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आउनु अघि कांग्रेसभित्र संसदीय दलको नेता कसलाई बनाउने भन्ने विषयले बहस पाउन थालेको छ ।
यसअघि संसदीय दलको नेता बनिसकेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावमा निर्वाचित भएका छन् । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोर्नु परेको क्षति नेतृत्वको कमजोरीले रहेको निष्कर्ष निकाल्दै केही नेताले देउवाको विकल्पमा जानु पर्ने बताएका छन् । तर, उनको सम्भवान अस्वीकार गर्ने अवस्था भने छैन । पार्टी सभापति रहेका देउवा यसअघि संसदीयको नेता भइसकेका छन्, भने हाल प्रधानमन्त्री रहेका छन् । जसले दलको नेता बन्ने अवस्थाबाट देउवा अलग नरहेको कांग्रेसका नेताहरु भन्छन् ।
यस्तै, देउवापछि प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, मिनेन्द्र रिजाल र गगन थापाको नाम संसदीय दलको सम्भावित नेताको रुपमा चर्चा चलेको छ । सिंह र कोइराला आफू भावी संसदीय दलको नेता बन्नु पर्ने विचारमा छन् भने पार्टी कार्यकर्ताबाट युवा नेता गगन थापालाई बनाउनु पर्ने दबाब आउन थालेको छ ।
संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निभाउनु पर्ने कांग्रेसको प्रभाव भावी नेताको क्षमतामा निर्भर रहने हुँदा दलको नेता ‘को’ बन्ने भन्ने अहिले आम चासोको रुपमा देखिएको छ ।
चुनावमा बाम लहर आएपछी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले मुख खोले, सोधे एस्तो प्रश्न
यी पोजिसनहरुमा सम्भोग गर्दा लामो समय सम्म गर्न… (204)